ထရမ့်ဘက်က ရှုံးနိမ့်ပေမဲ့ မကျေနပ်လို့ တရားစွဲဆိုမူများ ပြုလုပ်ပြီး တရားရုံးချုပ်ကို ရောက်ရင် ဘာဖြစ်လာမလဲ ? – Shwe Ba
Homepage / International News / ထရမ့်ဘက်က ရှုံးနိမ့်ပေမဲ့ မကျေနပ်လို့ တရားစွဲဆိုမူများ ပြုလုပ်ပြီး တရားရုံးချုပ်ကို ရောက်ရင် ဘာဖြစ်လာမလဲ ?
ထရမ့်ဘက်က ရှုံးနိမ့်ပေမဲ့ မကျေနပ်လို့ တရားစွဲဆိုမူများ ပြုလုပ်ပြီး တရားရုံးချုပ်ကို ရောက်ရင် ဘာဖြစ်လာမလဲ ?
By Shwe BaPosted on November 7, 2020 November 7, 2020
မဲရေ တွက်မှု မပြီးသေး သော်လည်း Trump ရှုံးနေပီလို့ ပြောလို့ ရပါ တယ် ။
PA, MI, NV နဲ့ GA ပြည် နယ် တွေမှာ Trump ဖက် က တရားစွဲဆိုမှု တွေတစ်ပြိုင်တည်း လုပ်ထား ပါ တယ် ။ တရားစွဲတဲ့ အမှုတွေ က တော့ ၊ တရား ဝင် စောင့်ကြည့် သူတွေ အားမဲေ ရေတွက် တဲ့ အခန်းတွေ ထဲကို ဝင်ခွင့် မပြုမှု၊ မဲပြားပေါ် က လိပ်စာမှာ မ နေထိုင်သူ တွေ ဝင်ရောက် မဲပေးမှု၊ သေ ဆုံးစာရင်းထဲ ကလူေ တွနာမ ည် နဲ့ မဲတွေကို ထည့်သွင်းရေတွက်မှု နဲ့ မဲရေတွက်ပုံေ ရတွက်နည်းကို အငြင်းပွါးမှု တို့ပါဝင်ပါတ ယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် October လ တုန်းက အရေးကြီးတဲ့ အမှုတစ်ခုဖြစ်ခြဲ့ ပီး US Supreme Court ကဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေး ပဲ တိုးလို့တန်းလ န်း ရှိနေပါသေးတယ်။ လူတွေ သိပ်မသိကြပါဘူး။
Pennsylvania (PA) ပြည်နယ်ဥပဒေ အရ ရွေးကောက်ပွဲနေ့ Nov.3ရက်နေ့သည် မဲရေတွက်ရန် နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်သ ည် ဟု သတ်မှတ် ထားသော်လည်း အဲ့ဒီ ပြည်နယ် ဒီ မိုကရက်တစ်ပါတီနှင့် ပြည်နယ်အတွင်းရေးမှုးတို့ က စာတိုက်မှလက် ခံရရှိသောမဲများကိုရေတွက် ရန် No v.6ရက်နေ့ ညနေ ငါးနာရီ အထိ အချိန်ဆွဲသတ်မှ တ်ခဲ့ပါသည်။
ဤသို့ သ တ်မှတ်ခြင်းသည် ပြည်နယ်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ထိုသတ်မှတ်ချက် ကို ဖျက်သိမ်းပေးရန် PA ရီပတ် ဘလီကန်ပါတီမှ ပြည် နယ် တရားရုံး ချုပ် (state supreme court) သို့ ရွေးကော က်ပွဲနေ့ မတိုင်ခင် October လတုန်းက ကန့်ကွက်ခဲ့ပါသ ည်။ သို့သော်လည်း ပြည်နယ် တရားရုံးချုပ်က ပယ်ချခဲ့ပါ သဖြင့် အမြင့်ဆုံးနိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ် (U.S. Supreme Court) သို့ တစ်ဆင့်တက်အ ယူခံဝင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအ ချိန်က တရားသူကြီး ကိုးဦး ရှိရမည့်အစား တစ်ဦး ကွယ်လွန်သွားချိန်ဖြစ်သောကြောင့် ရှစ်ဦးသာ ရုံးထိုင်နေပါတယိ။
U.S. Supreme Court က အမှုကိုလက် ခံပြီး မဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရာ တရားသူကြီး တစ် ဖက်လေးဦးစီဖြစ်နေသဖြင့် အပြီးသတ် ဆုံးဖြတ်ချက်မချနို င်ခဲ့ပါ။ ပြည်နယ်တရားရုံးချုပ် ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ရွေးကော က်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံတော်တ ရားရုံးချုပ် (U.S. Supreme Cour t) မှာ ဒီအမှုဟာ ယနေ့တိုင် မဆုံးဖြတ် ရသေးတဲ့အမှုအဖြစ်ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒီနောက်မှာ တရားသူကြီး Barrette ကိုအစားထိုးအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အကယ် ၍ ဆက်လက်စစ်ဆေးပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချမ ည်ဆိုပါက တရားသူကြီး ကိုးဦး ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အရှုံးအနိုင် အဖြေထွက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
အခြေခံဥပေ ဒက ဘာပြောသလဲ။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့် အချိန်၊ နေရာ နဲ့ စီမံဆောင်ရွက်မှုပုံစံကို ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကသာဥပဒေပြုပေးရမှာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ရွေးကော က်ပွဲနောက်ဆုံးရက်သတ်မှတ်ခြင်း၊ မဲပြားတွေရဲ့ တရားဝင်မှုအဓိပ္ပါယ်ဖော်ဆိုခြင်း၊ မဲတွေ ရေတွက်ပုံရေတွက်နည်း စတာတွေကို ပြည်နယ် ဥပဒေပြုကော်မီတီ ကသာ သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်နယ်တရားရုံးချုပ်(State Supreme Court) ကဝင်စွက်ဖက်လို့မရပါလို့ U.S. အခြေခံဥပဒေက ဆိုထားပါတယ် ။
ဒါကြောင့် PA Supreme Court သည် PA လွှတ်တော်ရဲ့ဥပဒေပြုရေးကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် အခြေခံဥပဒေကို ချိုးဖောက်ရာရောက်ပါသည် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်ြ ဖင့် Trump ဖက်က U.S. Supreme Court မှာ ငြင်းခုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအမှု မှာ U.S. Supreme Court တရားသူကြီး ကိုးဦးအနက်အနည်းဆုံးငါးဦးက Trump ဖက်ကိုအနိုင်ပေးလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။တရားသူကြီးအသစ် ဖြစ်တဲ့ Amy Coney Barrette ကို ဘာ ကြောင့် အချိန်တိုအတွင်းအတည်ပြုနိုင် အောင် Trump နဲ့ ရီပတ်ဘလီကန်တွေကြိုးစားခဲ့ကြတာလဲ။ ဒီမိုကရက်တွေက ဘာကြောင့် အသေအလဲ ကန့်ကွက် တားဆီးခဲ့ကြတာလည်းဆိုတာ စာဖတ်သူတွေနားလည်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။
တစ်ခြားပြ ည်နယ်တွေမှာလည်းသက်သေအခိုင်အလုံပြနိုင်ရင် Trump ဟာ သမတအဖြစ် ဒုတိယသက်တမ်းကိုဆက်လက်တာဝန်ယူသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုပါရစေ။
မူရင်လင် – https://www.foxnews.com/opinion/trump-biden-election-supreme-court-john-yoo?fbclid=IwAR3U-BcdkcORJM8dhcBaAr8ieIMY3GECBJL4L9yUIOuNrFOV_iphjiR3oL4
crd : Thein Lwin
အမေရိကန် ဘဏ်တွေ က နေ တဆင့် မြောက်ကိုရီးယား တွေ ငွေ ကြေး ခဝါ ချ
အမေရိကန် သမ္မတ သစ် ဘိုင်ဒန် ကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာမယ့် ကမ္ဘာလုံး ဆိုင် ရာ ဂယက် များ အ ကြောင်း
ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကို အမေရိကန် သမ္မတ အဖြစ် အသိ အမှတ်ပြုကြောင်း တရုတ် ကြေညာ လိုက်ပြီ
Previous post ချစ်စဖွယ် စကပ် အတိုလေးကို ၀တ်ဆင်ပြီး ကလေးတစ်ယောက် လို ရေခဲမုန့် တွေ အားပါးတရ စားနေတဲ့ စုလှိုင်ဝင်း ရဲ့ ဗီဒီယို လေး
Next post ဓာတျကွီးလေးပါးအောကျမှာ ဓာတျပကျြ သှားစေ မယျ့ ဘာဘီ အလှပါ ကိုကို ဆိုလိုကျတဲ့ မကျြဝနျး